We Fight We Win. -- " More than Media ": နိင်ငံတော်ချီးထုတ် များရဲ့စကား
နိင်ငံတော်ချီးထုတ် များရဲ့စကား
နိင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်မယ်ဆိုတာလဲ မလွှတ်ဘူး။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ကိုလည်း
မှတ်ပုံတင်ထားတာကို ယခု ထိ အတည်မပြုသေးပါ။ မှတ်ပုံတင် မှုကိုအတည် ပြုပေး လိုက်ရင် အမျိုးသားဒီမို
ကရေစီအဖွဲ့ ချုပ်ဟာ အဖွဲ့ ဝင်သန်းနဲ့ ချီ ၀င်ရောက်မဲ့ အခြေအနေမှာရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်ဆွဲနေတာလို့ယူဆရတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကလည်း ပျက်တက်တက်
Amay Su, aunty Su..Daw Daw Su and NLD, how to do??? That is why no one believe to Junta, they are lie.. (Just see, they will release!!!)yes they will release who are only water snake..they scare to 88 and who are right person..
A snake who changes the skin. Snake is the same snake?? Cobra is cobra. Viper is viper. Cobra and viper never become green snake???
ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေ:သမားများအားလုံးကျနော်အစ ပထမက တော်တော်လေးအထင်ကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာ များသောအားဖြင့် ဆင် ဟာကို ခွေးမျှော်သလိုအဖြစ်မျိုးဘာဖြစ်လို. ခဏခဏ အဖြစ်ခံခြင်နေကြတာလဲမသိဘူး ကျနော်စဉ်းစားမရပါ။ အန်တီစုကအစပေါ့ ခင်ဗျားတို.ကိုကျနော်ပြောလိုက်မယ် တသက်လုံး မသေမခြင်းမှတ်ထား ဘယ်တောာ.မှ ကျနော်တို.ရဲ.ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို ဘယ်စစ်အစိုးရလက်ထက်ရောက်ရောက်(ပုဆိုးဝတ်စစ်အစိုးရ)ဘယ်တော.မှ သာသာချည်ချည် နဲ.လွတ်မြောက်မလာ နိုင်ပါဘူး။ ကျနော်က ဘဘဦးဝင်းတင် ရဲ. ဦးနှောက်ကိုပိုသဘောကြတယ်။သူအခု.အန်တီစုနောက်မှာရှိတယ်ဒါပေမဲ. သူမျက်စိမှိတ်ပြီးရပ်နေတာ။
2 January 2012 at 19:37
2 January 2012 at 19:38
i think thein sein trying to lie US, china and all because he want to follow the paths of mubarak, saddam and kadhafi.
I lost my trust to thein after he spoke the media at Bali, Indonisia.
we'll see what he going to do?
hello my fellow people from Burma, thein sein can choose his fate for now. let them lie,lie,lie,lie,lie and lie but they don't have much time left.
2 January 2012 at 20:26
စစ်တပ်က ကောင်တွေ။ စစ်တပ်ကထွက်တဲ့ စစ်တပ်လူထွက်တွေ စကား နားယောင်ရင် နားထောင်ရင် အမှားတကာအမှားဆုံးကို ကျူးလွန်
3 January 2012 at 03:09